Sidee loo xakameynayaa isbeddelada laga sameeyay khariidada - Geofumadas
Febraayo, 2008 cadastre, Microstation-Bentley
Waxaa jira dhowr sababood oo aad ugu baahan tahay inaad xakamayso isbedelka maabka ama faylasha vector.
1. Si aad u ogaatid geeddi-socodka uu khariidaduhu ka gudbeen kacdoon ka dib, tan waxaa lagu magacaabaa dayactirka cadastaroolka.
2. Si aad u ogaato isbeddelada ay isticmaalaan dadyawga kala duwan faylka, haddii ay dhacdo in ay isticmaalaan dad badan oo isticmaala.
3. Si loo tirtiro isbeddel lagu sameeyay qalad ka dib markii la xirayo barnaamijka.
Haddii loo baahan yahay, waa maxay xaqiiqda ah in ay tahay mid aad u muhiim ah. Aynu aragno sida loo sameeyo Microstation.
1 Furitaanka amarka taariikhda
Hawlgalkan waxaa loogu yeeraa «taariikhda taariikhiga ah»Waxa kale oo suuro gal ah in" Tartanka / Qorsheynta Taariikhda ". Si aad u qorto amar qoraal ah Microstation, guddi amar ayaa loo adeegsadaa "yutiilitiyada / furaha" iyo kiiskan waxaa lagu qoray "show history" ka dibna gali.
Tani waa guddi ugu weyn ee qalabka archive taariikhiga ah, icon ugu horeysay ee waa si loo badbaadiyo isbedel, soo socda si loo soo celiyo isbedelka hore, Kii saddexaadna wuxuu u arkaan isbedel iyo kan ugu dambeeya waa inuu ku soo bilowdo marka hore taariikhiga ah. Waxaad soo celin karaa isbadal kulan kasta, iyadoo aan loo eegin amarka, isbedelka isha ugu jajuubi ee aan ku badbaadi, laakiin marka user a dhaqaajiso doonaa button "Guddiga", xataa haddii user a qaadataa map a in user kale ayaa la badbaadiyey isbedel ku nidaamka aad ka digay in usuairo ah sameeyey "Guddiga".
2 Bilaabidda faylka taariikhiga ah
Si aad u bilowdo faylka taariikhiga ah, badhanka ugu dambeeya waa la furfuray.
3 Muuqaal isbedel ah
Hadda waxaan arki karnaa faylka taariikhiga ah ee dhinaca midigta, cagaaran ee taxadiyada dheeraadka ah, ee casaanka la tirtiray iyo kuwa buluuga ah kuwaas oo la beddelay kaliya. Isbedelada la soo xulay ayaa lagu muujiyaa midabkooda, badhanka ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad doorato haddii aad rabto inaad aragto noocyada isbeddelka qaarkood, sida kuwa laga tirtiro tusaale ahaan.
In kiiskayga ayaan loo isticmaalo mashaariic qaar ka mid ah si loo xakameeyo dayactirka cadastral. Habab badan oo dalka ka dib markii bandhig dadweynaha u sheegi rasmi ah khariidada oo waa waqtigan in uu shidaa archive taariikhiga ah, hab in aad ka arki kartaa waxa ay ahayd dhismaha, sida takooran ama dib u habaynta iyo gaar ahaan awooddo gacanta ku isbeddel ah dayactirka nidaamka si toos ah ku darayaa user, taariikhda, iyo waxaad ku qori kartaa sharaxaad ka mid ah isbedel macaamilka sida dayactirka ama faahfaahin muhiim ah.
Tusaalahan, dhismaha bilowga wuxuu ahaa 363, taasina waa sababta ay u muuqato casaan sababtoo ah waa la tirtiray, ka dibna buluugyada ay ku soo baxday muuqaalka iyo cagaarka waxaad arki kartaa xariiqda dhismaha kala qaybsamay. Waa maxay cawliga aan la helin isbedel kasta. Lambarrada buluugga waa inay noqdaan buluug, laakiin waxay u badan yihiin inay ka guuraan meeshii markii hore loo abuuray.
4. Sida loo tirtiro faylka taariikhiga ah
Waa hagaag, in aan xitaa isaga arki kartaa dareenka badan macquul ah maxaa yeelay file u leedahay in ay taariikhiga ah waxaa isagoo aan ahayn kan weyn. Laakiin haddii aad rabto in aad tirtirto file hore sida aad samayn karto waa u furan map cusub, wac tixraaca taas oo uu leeyahay taariikhi ah iyo nuqul / paste our file ka mid ah iyada oo loo marayo xayndaabka / nuqul ama koobi / dhibic dhibic asal / caga at hal dhibic ka mid ah.
Post Previous«Previous ASCII farshaxan ayaa ku yimid Khariidadaha Google
Post Next Fahmidda qiyaasta UTMNext »